Ederede Ashley Walsh na Martech Zone |
Edemede site na Ashley Walsh
Mgbe ị banyere n'ihe mberede ụgbọ ala, daa ma ọ bụ nwee ụdị mmerụ ahụ ọzọ, ihe ikpeazụ ị nwere ike iche bụ nke ụlọ mberede nke ịchọrọ ịga leta dabere na azụmahịa ikpeazụ, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ ozi email ị hụrụ. . Ulo ahia a adighi etinye aka n'oge ihe mberede. Agbanyeghị, ịre ahịa ahụike karịrị ngalaba azụmaahịa mberede yana ngalaba nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ. Lọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ nlekọta ngwa ngwa, yana ebe ọdịmma dị ọrụ
Na Tọzdee, Septemba 27, 2016 Na Tọzdee, Septemba 27, 2016 Ashley Walsh
You na - agba mbọ ịkwalite nrụpụta ọrụ gafee azụmaahịa gị? Ya bụrụ otú ahụ, ọ bụghị naanị gị. ServiceNow kọrọ na ndị njikwa taa na-etinye ihe dịka pasent 40 nke izu ọrụ na ọrụ nchịkwa - nke pụtara na ha nwere ihe karịrị ọkara izu iji lekwasị anya na ọrụ dị mkpa. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere azịza: arụmọrụ na-arụ ọrụ arụmọrụ. Pasent iri asatọ na isii nke ndị njikwa kwenyere na usoro ọrụ akpaghị aka ga-abawanye arụmọrụ ha. Pasent 55 nke ndị ọrụ na-enwekwa obi ụtọ